August 9, 2020 834
दक्षिण कोरियाली कम्पनी साम’सुङले एकसाथ आफ्ना पाँचवटा नयाँ प्रडक्ट सार्वज’निक गरेको छ । भर्चुअल पत्रकार सम्मेलन’मार्फत् सामसुङले आफ्नो ग्याले’क्सी नोट सिरिजको नयाँ स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको छ ।
त्यस्तै ग्यालेक्सी ट्याब्स एस सेभेन, ग्यालेक्सी जेड फोल्ड टू, ग्यालेक्सी वाच थ्री र नयाँ वायरलेस इयर&फोन पनि सार्वज’निक गरिएको हो ।
नोट टू सिरिज अन्तर्ग’त सामसुङले ग्यालेक्सी नोट २० र ग्यालेक्सी नोट २० अल्ट्रा गरी दुईवटा मोडेलका फाइभ जी फोन सार्वजनिक गरेको छ । ग्यालेक्सी नोट २० को सुरुवाती मूल्य ९९९ डल’र तोकिए_को छ भने नोट ट्वान्टी अल्ट्राको सुरुवाती मूल्य १२९९ डलर तोकिएको छ ।
नोट २० सिरिजमा परिस्कृत एस पेन हुनेछ र त्यस’ले स्क्रिनमा लेख्दा साँच्चीकै कलमको कागज’मा लेखेको भान हुने दाबी सामसुङको छ ।
ग्यालेक्सी नोट २० मा ६.७ इन्चकेा स्क्रिन हुनेछ भने अल्ट्रा भर्सनको स्क्रिन ६.९ इन्च हुनेछ । दुबै फोनको पछा’डिको भागमा तीनवटा क्यामरा हुनेछन् भने एउ’टा सेल्फी क्यामरा रहनेछ ।
-नयाँ फोल्डेबल फोन
उक्त समारोहमा सामसु’ङले सार्वज’निक गरेको आफ्नो आसन्न फोल्डेबल स्मार्ट’फोन उसको तेश्रो फोल्डेबल फोन हुनेछ । सामसुङको आगामी फोल्डेबल फोनको नाम ग्या’लेक्सी जेड फोल्ड टू हुनेछ । त्यसमा ६.२ इन्चको फ्रेन्च स्क्रिन हुनेछ जसलाई बा’हिर खोल्दा ७.६ इन्चको फ्लक्सिबल डिस्प्ले देखा पर्नेछ ।
सामसुङले गत वर्ष आफ्नो पहिलो फोल्डे’बल फोन, ग्यालेक्सी फोल्ड ल्याएको थियो । त्यस्तै सन् २०२० को सुरुवा’तमा उसले दोश्रो फोल्डेबल फोनको रुप’मा ग्यालेक्सी जेड फ्लिप ल्याएको थियो ।
-दुई नयाँ ट्याब्लेट
सामसुङले एस सेभेन सिरि’जका दुई नयाँ ट्याब्ले’ट सार्वजनिक गरेको छ । ती दुई नयाँ ट्याब’लेट ट्याब एस सेभेन र एस सेभेन प्लसले फाइभ जी सपोर्ट गर्ने बताइएको छ । ट्याब सेभे’नको सुरु’वाती मूल्य ८ सय ४९ डलर र एस सेभेन प्लसको सुरुवाती मूल्य १०४९ डलर रहेको छ ।
-नयाँ स्मार्टघडी र एयरफोन
सामसुङले ल्या’एको नयाँ स्मार्टवाच ग्यालेक्सी’ वाच थ्रीको मूल्य ३ सय ९९ डलर र ग्यालेक्सी बड्स लाइभ एयर’फोनको मूल्य १ सय ६९ डलर तोकिएको छ ।
-अगष्ट २१ देखि बजारमा
समाचार अनुसार साम’सुङले सार्वजनिक गरे’का नयाँ ग्याजेटहरु मध्ये फोल्डे’बल स्मार्टफोन बाहेकका ग्याजेटहरुको यहीँ बुधबार देखि पि्रअर्डर खुल्ला हुने र आगामी अगष्ट २१ देखि बजा’रमा उपल’ब्ध हुने बताइएको छ । – एजेन्सी
यो पनि पढ्नुहोस्….उत्तर कोरिया’ले बनाएका हतिया’रले प्रतिघन्टा २ लाखको ज्या’न लिन सक्ने !
उत्तर कोरियाली हति’यार हरु यदि दक्षि’ण कोरिया विरु’द्द प्रयोग गरिएमा एक घण्टामा २ लाख दक्षिण कोरियाली नाग’रिकको ज्या’न जाने अमेरिकी थिङ्क ट्याङ्कले जनाएको छ ।
हाल उत्तर कोरियाले ६ हजार बढी त्यस्ता मि’ साईल हरु दक्षिण कोरियाको घना वस्ती भएका क्षेत्रहरुमा राखेको बताउदै तिनले लाखौं कोरियाली नागरिकको ज्या’न केमिकल अथवा न्यु’क्लियर हति’यार प्रयोग नगरि नै लिन सक्ने ख’तरा औंल्याएका छन् ।
यदि ५,७०० त्यस्ता मिसा’ईलहरु डिमिलिटराईज क्षेत्र वरपरबाट दक्षिणमा प्र’हार गरिएमा अमेरिकी सैनि’कको दक्षिण कोरियाली हेडक्वार्टर लगायतका घना वस्ति रहेका क्षेत्रसम्म सहजै पुग्ने मध्यम तथा लामो दुरीका मि’साईलहरु उत्तर सँग रहेको बताउदै ति हति’यार ले एक हमलामा धेरै मानिसहरुको ज्या’न लिने बताइएको हो ।
यदि डिमिलिटराइज क्षेत्र वरपर मात्र ति ह’तियार हरुको प्रयोग गरि हम’ला गरिएमा एक मिनेटमा ४५०० जना मानिसको ज्या ‘ न जान सक्ने थिङ्क ट्याङ्कले जनाएको छ ।
उक्त संस्थाले दक्षिण कोरिया तथा अमे’रिकालाई उत्तर कोरियालाइ उत्तेजित बनाउने किसिमका कार्यहरु नगराई सं’यमित तरिकाले उ सँग भएका ह’तियार नि’शश्त्रीकरण गर्न सल्लाह समेत दिएको छ ।
भड्किलो व्यवाहारले धेरै ना’गरिकको ज्या’न जान सक्ने भन्दै संयमित तरिकाले उत्तर कोरियालाई शान्ति प्रकृ’यामा ल्याउन उसले सल्लाह समेत दिएको छ ।हटपाटीबाट
Prevदक्षिण कोरियामा रहेका विदेशी कामदार’लाई आयो खुशीको खवर !
Nextउत्तर कोरियाले बनाएका हतिया’रले प्रतिघन्टा २ लाख दक्षिण कोरियालीको ज्या’न लिन सक्ने….